Filomanosana : sady fialamboly no fitaizam-batana feno | NewsMada
Feno sy hipoka tanteraka ireo dobo filomanosana eto amintsika rehefa fotoana tsy fianarana iny. Refa mafana toy izao mantsy ny andro, maro ny voasarika amin’ny filomanosana. Sady fialamboly tokoa mantsy ny lomano no fitaizam-batana feno.
Ao anatin’ny vanim-potoana mafana mihitsy isika eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Araka izany, efa misokatra avokoa ireo dobo filomanosana ary misokatra, manaraka, izany koa ny taom-pilalaovana vaovao eo amin’ny taranja lomano. Hoentina aminao eto amin’ity pejy manokana ity àry ireo voka-tsoa azo avy amin’ny filomanosana.
Raha ny fanadihadiana, ilain’ny vatan’ny olombelona ny milomano. Tsy vitan’ny hoe fanatanjahantena fotsiny ihany mantsy ny filomanosana fa fitaizam-batana feno mihitsy. Miasa sy mihetsika avokoa mantsy ireo ratsam-batana, ny fitaovam-pisefoana, ny maso, sns. Izay indrindra no mahatonga ireo mpitsabo sy ireo mpikaroka milaza fa fitaizam-batana feno ny lomano.
Ankoatra izay, nambaran’ireo manampahaizana mpikaroka ihany koa fa manasitrana aretina maro mpahazo ny olombelona ity taranja iray ity. Anisan’izany ny “asthmes”, izay tsy mifidy taona mihitsy ity aretin’ny fitaovam-pisefoana iray ity. Ny dokotera mihitsy no mampirisika ireo ankizy, tanora, sns, hilomano raha sendra voan’io aretina io. Etsy andaniny, ho an’ireo te hampihena vatana ihany koa, mety tsara ny milomano matetika, sns.
Na izany aza anefa, fialamboly ho an’ny maro ihany koa ny lomano fa tsy aingitraingitra ohatra ny handraisan’ny sasany azy. Maro mantsy ny zavatra azo atao anaty rano izay mifanaraka tsara amin’ny taona, indrindra ho an’ireo tsy mahay milomano.
Saingy, mila mitandrina hatrany isika rehefa miroboka anaty rano. Mila mifehy tena sy mahafehy tsara ny lomano isika mba hisorohana ny loza mety haterany.